अनुपसँगको अफेयर र ब्रेकअपबारे यसो भन्छिन् मलीना जोशी - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
अनुपसँगको अफेयर र ब्रेकअपबारे यसो भन्छिन् मलीना जोशी
२४ मंसिर,२०७३ | Forseenetwork
अभिनेत्री मलीना जोशी र अभिनेता अनुप विक्रम शाहीको प्रेमसँगै ब्रेकअप र प्याचअपको चर्चा भईरहन्छ । केही समय अघि, ब्रेकअप भएपछि पनि उनीहरुले एकसाथ काम गर्दैछन् भन्ने चर्चा खुबै भयो । तर मिडियामा आएका यस्ता खबरहरुलाई उनीहरुले नत खण्डन गरे नत आफूहरुको सम्बन्धबारे केही कुरा खुलाए ।
सिनेमा रानीमा पर्दा बाँडेका उनीहरु अहिले एक अवार्ड कार्यक्रमको तयारीमा छन् । यहि क्रममा एक यु ट्युब च्यानलले उनीहरुको सम्बन्धको बारेमा प्रश्न गर्दा अभिनेत्री मेलीनाले, हाम्रो सम्बन्धलाई लिएर बजारमा विभिन्न कुराहरु भईरहेका छन् । गसीपहरु बनेका छन् । त्यसलाई गसीप नै बन्न दिनुहोस् । म व्यक्तिगत जीवनका कुराहरुलाई मिडियामा ल्याउन चाहन्न । बरु हामी कामको कुरा गरौँ न भनेर उनले प्रसंग नै परिवर्तन गरिन् ।
अनुपले भने यस बारेमा बोल्दै आफूहरु मिल्ने साथी भएको र यो मित्रता सधैँ कायम रहने बताए ।
फिल्म खेल्नु पहिले यस्ती थिईन् ‘दर्पण छायाँ २’ नायिका साहारा
तुलसी घिमिरेको निर्देशनमा बनेको सिनेमा ‘दर्पण छायाँ २’ बाट सिने नगरीमा डेब्यु गरेकी अभिनेत्री साहारा कार्की अगस्ट १६ देखि १८ वर्षमा प्र..
बाढी पीडितका लागि कुन कलाकारको कति सहयोग ?
बिज्ञापनमा वास्तविक जोडी
पप गायक अनिल सिंहले किन आत्महत्या गर्छु भने ?
निशाको माग–पत्रकारले माफी माग्नुपर्छ